Muuri News Network » SAWIRO: Maamulka Konfur galbeed oo diyaarsaday Ciidamo Rag & Dumar.
SAWIRO: Maamulka Konfur galbeed oo diyaarsaday Ciidamo Rag & Dumar.
Feb 12, 2016 - Comments off
Waxaa tababar uga socodaa ciidamo ladoonayo in ay kamid noqdaan ciidamada Konfurgalbeed waana kuwii uguhoreeyey ee tababar lagu siiyo magaalada weejid ee gobolka Bakool.
Waxaana booqday xildhbaano,gudoomiyaha Bakool odayaal dhaqameedyo ciidamada sababta lootababaryo ayaa ah in ay go doonka kaqaadaan ayna furaan wadooyinka soogala degmada waajid oo mudo labasanoah aaney jirin cidkabaxda soonagashay.
Gaashaanle sare cabdi Maxamed Dile oo ah taliyaha ciidanka militeriga dowladafederalka soomaaliya ee degmadatan iyo sarkaalaka ciidanka itoobiya uqaabilsa degmada weejid ayaa kawarasmay ciidanka iyo sababta lootababarayo.
Xildhibaan Ugaas Isaaq Cali oo katirsan Baarlamanka KG iyo gudoomiyaha Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa ciidaanka kudhiirigeliyey in ay iskufuraan wadooyinka degmooyinka iyo gobolada. Kana shaqeeyaan amaanka dhawan loodhameystiridoono qalabkooda.
Sikastaba ha ahaatee dhalinyaradan tababarka ciidanimo qaadaneysa ayaa u sababeynaya in ay tababartaan magaaladooda oo go doonsan.